Ubuntu မှာ file owner မဖြစ်လို့။ — MYSTERY ZILLION
Ubuntu မှာ file owner မဖြစ်လို့။
January 2012 edited January 2012 in Ubuntu
ကျွန်တော် XAMPP ကို Ubuntu မှာသွင်းတာ။ opt ဖိုင်ကို permission ပြောင်းလို့မရဘူး။ You are not owner, so you can't change these permission ဆိုပြီးပေါနေတယ်။ Terminal ကနေလုပ်ဖို့ ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲလို့ ၊ ကူညီပါအုံး။။
Let me know how did you install XAMPP? By the way, why do you want to use XAMPP rather than installing MySQL, Apache and PHP separately on Ubuntu?
I only want to use for Apache and PHP.. which are the nice app?
ကျွန်တော် သွင်းလို့ရသွားပါပြီ။ http://freshtutorial.com/install-xamp-ubuntu/
အင်းဗျ တကယ်တော့ XAMPP ဆိုတာက လွယ်အောင်လုပ်ထားပေးတာ အဲဒီတော့ နောက်ဆုံးဆော့ဝဲတွေ မရနိုင်ပါဘူး Windows မှာဆိုရင် သုံးကာစလူတွေ Setup မလုပ်တတ်မှာစိုးတဲ့အတွက် အလွယ်တကူထည့်ထားတာပါ Ubuntu မှာက ဒီအတိုင်းကိုပဲ Setup လုပ်ရတာ လွယ်ပါတယ် အဲဒီတော့ တစ်ခုချင်းထည့်ပါ အောက်မှာ Commands တွေပြထားပါတယ် အဲဒီလို Install လုပ်လိုက်ပါ။
အဲဒါဆိုရင် သုံးလို့ရပါပြီ Ubuntu မှာကောင်းတာက Dependencies တွေကိုကိုယ်တိုင်ထည့်တာပါ phpmyadmin ထည့်လိုက်တော့ သူရဲ့ Dependencies တွေဖြစ်တဲ့ php လိုဟာတွေ အကုန်ထည့်ပေးသွားတော့ သိပ်များများလုပ်စရာ မလိုတော့ပါဘူး။
phpMyAdmin အတွက်က http://localhost/phpmyadmin မှာရှိပါတယ် MySQL အတွက် root user and password တွေက Install လုပ်တုံးက ဘာပေးမလဲမေးခဲ့ပါလိမ့်မယ် အဲဒါနဲ့ဝင်လို့ရပါတယ်။
Web Sites အတွက်က /var/www အောက်မှာ ဖိုင်တွေကိုထားရင်ရပါလိမ့်မယ် အဲဒါလည်း တစ်ခြားနေရာမှာထားချင်ရင်လည်း ပြောင်းလို့ရပါသေးတယ်။
Linux မှာတော့ XAMPP မသုံးပါနဲ့ အားမပေးချင်ပါဘူး တကယ်တမ်း Production အတွက်က XAMPP မသုံးလို့ပါ အဲဒါမှသာ Server တွေကို Setup လုပ်တတ်သွားပါလိမ့်မယ်။
ဟုတ်ကဲ့။ အကိုပြောမှပဲ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သိတော့တယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ တကယ်ပါ။
ကျွန်တော် သွင်းပြီးပြီ။ http://localhost/phpmyadmin မရဘူး။။
အင်းခက်တော့ခက်ပြီ အလွယ်ဆုံးနည်းပြောမှ မရတော့ဘူးဆိုတော့ တစ်ခုချင်း ပြန်မေးမှရတော့မယ်
1. MySQL Install လုပ်လို့ရပါသလား။
အဲဒီ့ Command နဲ့ဝင်လို့ရမရစမ်းကြည့်ပါဦး
2. Apache Install လုပ်လို့ရပါသလား။
http://localhost ဆိုရင် အနည်းဆုံးတော့ It works! ဆိုတဲ့စာကြောင်းပါတဲ့ Page တစ်ခုတော့ တက်လာရတယ်။
3. phpMyAdmin Install လုပ်လို့ရပါသလား။
/etc အောက်မှာ phpmyadmin/ ဆိုတဲ့ Directory ရှိရဲ့လား ကြည့်ပေးပါ။
4. Install လုပ်တဲ့အချိန်မှာ XAMPP ကိုရော Stop လုပ်ထားရဲ့လား အဲဒါကို Start လုပ်ထားပြီးတော့ Install လုပ်နေတာဆိုရင်တော့ Apache က Install လုပ်ပေမယ့် Start လုပ်မှာမဟုတ်ပါဘူး။
လုပ်ပြီးတော့ အောက်က ဟာပေါ်လာတယ်။
[email protected]:~$ mysql --user=root -p
Localhost လည်း အိုကေတယ်။
/etc အောက်မှာလည်း phpmyadmin ရှိတယ်
ကျွန်တော်လည်း အဲ့ဒါကို ပဲစဉ်းစားနေတာ. ဘာလို့ မရလဲလို့ ။
သွင်းတုန်းကတော့ တစ်ခုပေါ်လာတယ် ၂ခုထဲက တစ်ခုကို ရွေးခိုင်းတယ်။ ht... ကျွန်တော် သေချာ မမှတ်မိတော့လို့ Password ထက်တောင်းတယ်။ mySQL password ကိုပြန်ရိုက်ပေးလိုက်တယ်။။
အင်းသိပြီ phpMyAdmin ကို Apache နဲ့ Configure လုပ်မလား LightHttp နဲ့လုပ်မလားဆိုတာ ရွေးရတယ် အဲဒီ့နေရာမှာ Apache နဲ့မရွေးခဲ့မိလို့ Configure မလုပ်ပဲ ဖြစ်နေတာပါ တကယ်ကတော့ Manually လုပ်လို့ရပါတယ် ဒါပေမယ့် ရှုပ်နေမယ် အလွယ်ဆုံးနည်းက
အဲလိုဆိုရင် အဆင်ပြေတယ် အကုန်လုံး ပြန်ဖျက်ပြီးပြန်ထည့်လိုက် အဲဒီ့အချိန်မှာတော့ Apache နဲ့ Configure လုပ်ဖို့ Check လုပ်ပေးဖို့မမေ့နဲ့ဦး။
ကျွန်တော် ပြန်လုပ်ပြီးသွားပြီ။ အားလုံးအိုကေသွားပြီ... သေသေချာချာ ရှင်းပြတဲ့ အတွက် ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
အိုကေသွားရင် ပြီးတာပါပဲ ဒီလိုမေးခွန်းတွေ လာမေးရင် ကျွန်တော်လည်း ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မဟုတ်ရင် ကျွန်တော်လည်း ဖြေစရာမေးခွန်းမရှိရင် စိတ်ညစ်ပါတယ်။
var/www ကို ဘယ်လို့လုပ်ပြီး owner permission ရအောင်လုပ်မလဲ၊
ကျွန်တော် အကြံပေးချင်တာကတော့ Ubuntu မှာ xampp ကိုမသုံးပဲ lamp server အတွက် mysql, phpmyadmin, apache2 တို့ကို ဒီတိုင်း သွင်းစေချင်တယ် ခက်လည်းမခက်ပါဘူး။
the requested URL /lessons/index.php was not found on this server.
@sanwinoo125‌ because you don't have index.php file under lessons folder of your localhost. What is the Document path of your localhost ?
for file permission
what i do more?
Please help me @saturngod‌
@sanwinoo125‌ , try with
when i try http://127.0.0.1/lessions/index.php
The requested URL /lessions/index.php was not found on this server.
/var/www အောက်မှာ lessons ဆိုတဲ့ File တွေရှိရဲ့လား သွားကြည့်ပါဦး မရှိတဲ့ File ကို Request လုပ်နေတာလည်း ဖြစ်နိုင်ပါတယ်။
i got it... Thank For Help @CalmHill and @saturngod
apache2 default point has var/www/html/
i wrong call var/www/
i want to change default point from var/www/html/ - to - /var www/
and i only see zawgyi fonts on my firefox. i want to also see myanmar3
I don't think your default root is /var/www/html. Apache's default root on Ubuntu is /var/www. If you can access this URL http://127.0.0.1/html/ , you just need to move all files from html directory to /var/www/ and you may delete the html directory. Otherwise you will need to show me the contents of /etc/apache2/sites-enabled/000-default.conf